မှောင်ခိုဈေးကွက်နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဗဟိုဘဏ် ငွေစက္ကူသစ် ရိုက်ထုတ်မှု စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ချိန်ညှိရန်လိုသရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကို သာသနာ ညှိုးနွမ်းမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ချမှတ်မိုဘိုင်းဖုန်း ပြိုင်ပွဲကြီး စပြီအချုပ်သား ထွက်ပြေးမှုဖြင့် အိမ်မဲ ရဲစခန်းမှ ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး
Ko Thet November 22, 2012 - 6:44 pm Good! That’s the beginning ofafair border trade. No illegal imports avoiding the tax which causes loss of revenues to our country. I support this but make sure that there is no corruption on our side at the border inspections. Cheers!
Reply pps12345 November 23, 2012 - 9:52 am ကျန်တဲ့ အခွန်တော့ လျှော့ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောင်းဝယ်ခွန် ၅% ကို တရားဝင် တင်သွင်းရောင်းချ နေသူတွေက ဆောင်နေရပြီး တရားမဝင် တင်သွင်းသူ များ က ကင်းလွတ် နေခြင်းက မကောင်း ပါ။ CIF တန်ဖိုးများ ကို လျှော့လျှောက်ကာ ထိုရောင်းဝယ်ခွန် ကို ရှောင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြကာ ကျန်ငွေများကို မြန်မာဘဏ်က မလွှဲပဲ စင်ကာပူဘဏ်များမှ တဆင့် လွှဲကာ အလုပ်လုပ်နေရပါသည်။ ထို အကြောင်းများ ကြောင့် တနိုင်တပိုင် ကုန်သည်များသည် မှောင်ခို ကို အားထားကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရပါသည်။ ထို ရောင်းဝယ်ခွန် ၅% ကို လျှော့ချပေးခြင်း သို့ ထို ၅% ဆောင်သူများ ကို အခြား ဝင်ငွေခွန်များတွင် ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင်မှသာလျှင် မှောင်ခို တင်သွင်းမှု ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ထို အပြင် ဝန်ထမ်းများ ဖူလုံမှု ရှိစေရေး နှင့် လုပ်ငန်းစနစ်များကြန့်ကြာမှု မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ မှောင်ခို တင်သွင်းမှု ကို လျှော့ကျ စေမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
Reply မောင်မှန် November 24, 2012 - 8:20 am ခေတ်သစ်အတွေးအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်တတ်ဖို့လိုလာပြီ။
Reply ဦးအတွေ့အကြုံ November 24, 2012 - 8:23 am ခေတ်သစ်အတွေးအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်တတ်ဖို့လိုလာပြီ။